Tal Ihhotela 3 Ihhotela
Incazelo: Tal Ihhotela 3 itholakala Arenal - edolobheni resort of isiqhingi Mallorca. Ihhotela lakhiwa ngo-1969 ogwini Mediterranean e amakhilomitha 14 kusukela emzini Palma kanye nje drive iDemo kusuka esikhumulweni sezindiza.
Ihhotela inama indawo nelungelo eduze nogu, amanzi ipaki, iintolo, amathilomu, ema-disco, ezokuthutha izitobhi. Ihhotela idolobha siqukethe isakhiwo ayisishiyagalolunye storey futhi endaweni encane landscaped ne-swimming pool.
Amagumbi: Ukuze izivakashi Tal Ihhotela 3 yakhelwe 198 amakamelo double ejwayelekile nge ithala banikwa futhi ukubukwa yedolobha noma ulwandle. The elingaphakathi ubuswa anemibala bemvelo umoya imibala yemvelo yeMedithera. Amakamelo Decor avulekile nokukhanya ifenisha ngokhuni.
Ukuhlanzwa amakamelo kanye noshintsho amathawula inikezwa nsuku zonke. Nelineni washintsha njalo ngemva kwezinsuku ezintathu.
Ukudla: Kunezindlela eziningana ongakhetha kuzona ngoba ukudla nensizakalo yokudlela nge "lezitsha". cuisine yokudlela ngeke ukwanelisa abantu ezihlukahlukene bathanda, kuhlanganise inyama. On the table kukhona eziningi nama-dessert, izitsha imifino, inhlanzi kanye kwasolwandle. Mahhala utshwala zinikezwe kusukela kubakhiqizi bendawo.
Ibha ehhotela, etholakala endaweni yokwamukela izivakashi, awukwazi nje adle futhi ujabulele i-cocktail, kodwa futhi adlale amabhiliyade.
Beach: umgwaqo lolwandle ligijima emigwaqweni yomuzi futhi kuthatha imizuzu engaphansi kwengu-10. KaMasipala sandy beach ifakwe ukhululekile ilanga loungers kanye baphathe nezambulela, basolwa.
Ulwazi Olwengeziwe: I iholide ngokunganaki ebhishi nokuzijabulisa eminingi inikeza izivakashi zalo Ihhotela Tal 3. Mallorca - indawo ongenakulibaleka nge amasayithi yemvelo yomlando ofuna ukuba bathathe uhambo.
I izivakashi ehhotela nethuba bashintshisane lwemali, imithwalo yabo yokugcina, ukubeka izinto eziyigugu ngendlela ukuphepha idiphozi ibhokisi, imoto eqashiwe, ilondolo, okubiza udokotela, sauna kanye solarium. Ukuze uthole okwengeziwe, imali yokufinyeleleka Inthanethi esizeni.
Ngaphandle kokushiya ngaphandle kwehhotela ungathola eziningi izifundo. Kukhona ithenisi kanye Billiard amatafula, ingcula ibhodi, ejimini, internet cafe, imidlalo Igumbi kanye ikamelo TV.
Eduze Tal Ihhotela 3 ifakwe ilanga ithala ilanga loungers kanye ezimbili ongaphandle angenasawoti okubhukuda, enye yazo izivakashi abasha. Ebusika kubanda siphela pool zasendlini.
Izingane Umenyiwe mini-club kanye ebaleni lokudlala. ukudla ekhethekile yokudlela futhi uhlaka encane egumbini wawanakekela.
Digest: Ukuze uthole ehloniphekile iholide e Majorca uphelele Tal Ihhotela 3. Ukubuyekeza ukufakazela ukuthi ihhotela kuyafaneleka ukucabangela lapho ekhetha okunye engabizi nezimo okuhle ephilayo.
Ihhotela itholakala eduze ebhishi, izitolo kanye nokuzijabulisa. Izivakashi ziya indawo namakamelo abanzi futhi pretty kahle igcinwe nge balcony. Amakamelo zimane banikwa yonke imisebenzi imishini futhi basebenzise izinto zikagesi. ukuziphatha kwansuku zonke olunzulu yokuhlanza ezimanzi nokuguqulwa amathawula. Abasebenzi umfowethu onomoya ophansi nocabangelayo maqondana njalo guest.
Ukudla kuyehluka kantsi kunebugagu esiphundu, njalo eziningi imifino, izithelo, imifino kanye kwasolwandle. Ungadliwa abantu abangu cuisine ogxile zendawo ukudla ngamazwe wesiko.
I Tal Ihhotela 3 nsuku zonke Animators ukusebenza, okuyinto ubambe imincintiswano, imidlalo, imincintiswano futhi kwakha. Ngezikhathi zakusihlwa, ukuhlela zomculo libonisa ne iqhaza abaculi.
Sibhedlela "Velegozh": ukuphathwa, ukudla, izindawo
Ihhotela Kubi: Photo & Izibuyekezo
Efanelekayo pink umbala?
Senhliziyo arrhythmia, izimpawu, amafomu kanye nezinkinga
Biography Yany Poplavskoy - Soviet Red Riding Hood
Central Military sibhedlela Clinical "Marfinskiy": incazelo, amasevisi kanye nokubuyekeza
Yini amaGibhithe ayesebenzisa imifanekiso-isiphawulo? Amaqiniso angokomlando nezibonelo
Kanjani ukuthi abuyisele izifiso inganekwane?
Kuyini ubudlelwane be-interethnic?
Indlela Phucuzani ingilazi futhi izibani? izimpendulo lapha
Ikhambi elingcono kakhulu le umphimbo obuhlungu: izifutho, lozenges, amaphilisi, lozenges
Zonke izinhlobo dinosaur ngezithombe zeziqu, izincazelo